DEG DEG: :Xagla toosiye oo Muqdisho iska dhiibey Midnimadana taageeray – Marqaan News
Daawo:- Siyaasi kasoo jeeda Puntland oo suaalo adag ka keenay xaqiraadda uu Kheyre kusameeyay Askarta Gadoodsan 14 hours ago
Deg-deg:- MD Xaaf oo xabsiga dhigay laba kamid ah wariyaasha Dhuusamareeb iyo sabab cajiib ah oo loo cuskaday. 15 hours ago
Sidee maanta loogu tukaday salaadii Jimcaha Masaajida New Zealand “Khudbad iyo Baroordiiq heer sare ah”. 15 hours ago
Shil naxdin leh oo ay ku la’deen ciyaal Iskuul oo ka dhacay Duleedka Boosaaso “Maydad iyo dhaawac”. 17 hours ago
Daawo Muuqaal Naxdin leh:- Shan Masaajid oo kuyaal London oo la weeraray iyo Cabsida yurub oo Korodhay. 21 hours ago
Home 2018 July Somaliland, Wararka Maanta DEG DEG: :Xagla toosiye oo Muqdisho iska dhiibey Midnimadana taageeray
DEG DEG: :Xagla toosiye oo Muqdisho iska dhiibey Midnimadana taageeray
July 19, 2018 | by	marqaan | 9
Wasiirkii hore ee Caafimaadka Somaliland Dr. Saleeban Essa Ahmed “Xaglatoosiye ayaa sheegay mardhow in lala wada kulmi doono madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo loona kala dheereyn doono.
Wuxuuna Dr. Saleeban Essa Ahmed “Xaglatoosiye uu taageeray midnimada Somaaliya,waxaana muuqata in xoogaa siyaasiyiinta Somaliland sidii hore ka soo dabcayaan.
Feysal Cali Waraabe,Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Somaliland ayaa magaalada Brussels kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya,isagoona sheegay in wax badan oo quseeya arrimaha Soomaaliya ka wada hadleen.
Filed in: Somaliland, Wararka Maanta
9 thoughts on “DEG DEG: :Xagla toosiye oo Muqdisho iska dhiibey Midnimadana taageeray”
Dab La Ridey July 19, 2018 at 11:10 am · Edit
Anigu Waxaan Ku Talin Lahaa in Wixi Horgale ka ahaa SNM group in Xabad Lagu Toogto ileyn waa qof danayste ah oo jeebkiisa ilaalinaya oo eegaya Meesha ay maslaxad ugu Jirto oo aan dan iyo muraad ka lahayn ummadda somaliyeed ,waana qof iibin kara dhulka somaliya haddi lacag la siiyo.
Gabar Harti July 19, 2018 at 11:50 am · Edit
kkkkkkkkkkkkkkkk Alleylehe maxaa kuu baxay?
Waa sax taas Suldaan oo weliba odaygii TENEG asagu horta CARRABKA waa in laga jaraa intaan lala xaajoon maxaa jira asagaa laga hayaa “QOFKII IIDOORA OO SOMALI KOONFUR LAHADALA CARRABKA HALAG JARO”
Ali July 19, 2018 at 12:52 pm · Edit
Xaglatoosiye, Cali khaliif, Baashi, Ina Cali koore iyo Ina cambaashe goor hore ayeey ka bexeen qabiilka dhulbahante, sidaa awgeed iyaga oo aan cidna matalin meeshay doonaan ayeey ku biiri karaan, farmaajo waa inuu taas ogaadaa! Waa niman iibiyey sharaftii iyo dhulkii dhulbahante dhiigga hadda tukaraq ku daadanayo iyagaa ka masuul ah, dumarka ooyaya iyagaa ka masuulka, dhulkii dhulbahante ee snm qaadatay iyagaa ka masuulka, ceebta iyo magac xumada dhulbahante ku habsatay iyagaa ka masuulka sidaa awgeed niman dhulbahante kama tirsada taasi cidwalbo ha ogaato.
Idoor Biiqey July 19, 2018 at 2:02 pm · Edit
Feedh macansade aya ugu liita. Hadalada ku hadlo hadii maqashiid waa yaabaysa.
Caabudwaaq July 19, 2018 at 5:13 pm · Edit
Baashe, Cali khaliif, dhakool,Ina khayre dirir, xaglo toosiye, Ina koore iyo Ina canbaashe waa wada dawacooyin Aan lahayn diin iyo damiir Toona .
Caabudwaaq July 19, 2018 at 5:23 pm · Edit
Dhulbahante haduu horgalada hal mid khaarijin lahaa walaahi shaqadaa Way ka bixi lahaayeen, Lkn Dhulbahantaha Ayaa ah dad masaakiin ah oo Aan damqan karin.
Qabiilada kale saacad kuma dhexnoolaadeen raga noocan oo kale ku shaqaysta sida: Mareexaan, habargidir, majeerteen iyo isaaq.
Dhulbahante waa dad darxumada dugsada walaahi. Anaku reerka Dhulbahante sidan uma qabin walaahi.
Anonymous July 19, 2018 at 5:43 pm · Edit
Waxaan layaabaa marka aan arko qof dhulbahantaa. Oo qof ladoodaya anigu mahadleyn hadaan ahaan lahaa dhulbahante.
ebyan. July 20, 2018 at 1:14 am · Edit
Xagla tuusiye aniga xageyga horgal ma aha, waa ninka uugu raganimada badan cida. waa nin go,aan leh. laakiin cali khaliif galeyr iyo siyaasiinta dhulbahante baa sababtaas lahaa dee waxaa la yiri rag ciil cadaab ka dooray.
Ceyntey July 20, 2018 at 9:29 am · Edit
marba meel u carar wxaa dhaanta keligaa taagnow